Ukuphupha iNombolo 1 Discover ▷ Discover Online ▷ ➡️
Inye ibalulekile phakathi kwamanani. Lelona nani lokuqala kunye ne-eigenvalue, linani lokuqala kwaye kunye ne-zero zenza isiseko senkqubo-mbini; Ukulungiswa kwedatha yekhompyuter okusetyenziswa ziikhompyuter kusekwe koku. Inani lokuqala lihlala liqinisekile. Yeyona nqanaba libalaseleyo kunye nelona nqanaba liphezulu. Ngayo ufunda inani lokuqala letafile yokuphindaphinda. Inombolo 1 ikwaqulathe igama elikhethekileyo okanye elikhethekileyo.
Ukuba uphupha enye okanye indibanisela yamanani enye, mhlawumbi uyazibuza ukuba ingaba imalunga nantoni na. Mhlawumbi umphuphi ulindele inqaku elilungileyo. Kodwa unokuba ngowokuqala ukuzibona kukhuphiswano. Ukutolikwa kwamaphupha umbuzo uvela malunga nokuba yeyiphi intsingiselo yobuqu isimboli yephupha "inombolo 1" ephupheni.
1 Uphawu lwephupha «inombolo 1» - ukutolikwa ngokubanzi
2 Uphawu lwephupha «inombolo 1» - ukutolikwa kwengqondo
3 Uphawu lwephupha «inombolo ye-1» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «inombolo 1» - ukutolikwa ngokubanzi
Inombolo enye inokuba nesalathiso sokwenene ekutolikeni amaphupha. Inokuba yinxalenye yomhla obalulekileyo, inxenye yengxaki yezibalo, okanye uphawu lwephupha, umzekelo, lubonisa inani lendlu okanye ixesha. Ngamanye amaxesha inani liyavela njengenombolo yethamsanqa ephupheni.
Inye ekuchazeni amaphupha ngumqondiso wobuntu kwaye eyahlukileyo. Ngokunokwenzeka inombolo yoku-1 ephupha ngayo ngumqondiso wokuzimela kwengqondo kwabaleleyo.
Kwangokunjalo, umphuphi unokumela iinzame, naye kunye nokusingqongileyo ngendlela exhomekeke ekuxhaseni nasekuxhaseni. iphelele zikhona. Ngokwenkcazo yamaphupha, oku kuthetha ukuba amaphupha ayaziqonda kwaye kwangaxeshanye Imvisiswano Kwaye ufuna ukufezekisa ukuvumelana nendalo kunye nezidalwa zayo.
Kutoliko lwamaphupha, uphawu lwephupha "inombolo 1" ikwangulo Comenzando Yonke into kwaye kwangaxeshanye kukho into ekufanele ukuyilwela injongo. Nabani na ophupha elinye, ke, kufuneka aphendule umbuzo wokuba siyintoni isiseko salo kwaye zeziphi izicwangciso kunye nemibono ofuna ukuziqonda.
Uphawu lwephupha «inombolo 1» - ukutolikwa kwengqondo
Kwinqanaba leengqondo, uphawu lwephupha "inombolo 1" lubhekisa kukugqibelela komntu. I-subconscious iyenza icace ngokuphupha ukuba wahlukile kwaye iyunithi engenakwahlulwa iintlobo zomzimba nomphefumlo.
Iphupha linokuba sisikhumbuzo sokungazijongi ngokunzulu kwaye uqonde amandla akho. Oku kukwabonisa ukutolikwa kwamaphupha amandla ezengqondo kunye namandla omlinganiswa asakhulayo.
Enye inkalo yephupha ngumnqweno woku ukugqibelelaukufezekisa. Umphuphi ulangazelela ukuba yeyona nto ibalaseleyo kuyo yonke into kwaye uyoyika ukungazalisekisi eli bango. Kule meko, uphawu lwephupha "inombolo 1" lunokubonisa iimvakalelo zokujongela phantsi. Oku kuqinisekisa ukuba umntu ophuphayo uziva engonwabanga eluntwini kwaye akanakukuqonda ukubaluleka kwakhe.
Nabani na oqonda ibhola enye kumgaqo wesilayidi kwaye azame ukusombulula ukubala nayo kwisehlo sephupha kuxhomekeke kuncedo loontanga bakhe. Ukuba umntu oleleyo uyongeza le bhola kwezinye iibhola, kunokwenzeka ukuba ubala ngokwenyani.
Uphawu lwephupha «inombolo ye-1» - ukutolika kokomoya
Inombolo enye luphawu lophupha lwenkqubela phambili ngokomoya. ukukhula kwengqondo yokuphupha. Ukutolikwa kwamaphupha, enye ibhekisa kokubini nakuye Ukuqala kwayo yonke into. Ikhokelela umntu ephupheni kubumbano lwendalo iphela.